Accueil > Gazetin'ny nosy > Antsirabe: Olona an’arivony nanao hetsika teo amin’ny fitsarana
Antsirabe: Olona an’arivony nanao hetsika teo amin’ny fitsarana
Vahoaka an’arivony no niakatra teto Antsirabe omaly Alatsinainy avy amin’ny kaominina maromaro ao andrefana Atsimon’ny distrikan’i Betafo . Tezitra mafy ireo vahoaka ka naneho ny firaisankina mba amoahana ireo lehilahy 19 izay mpanara-dia omby very ka nahatratraran’ny zandary basy miisa 18. Niakatra fitsarana androany ny raharaha, raha tsiahivina dia nisy fanafihana nataon’ny jiolahy ny 9 martsa 2018 ka narahan’ ireto fokonolona, rehefa narahina ny dian’omby dia hita fa nihazo an’i Bemaha ireo omby 9 very. Rehefa tonga teo amin’ny ranon’ I Manandona dia nisy zandary nisava ireo mpanara-dia, ka nahitana basy 18 teny amin’izy ireo.
Noentina nangatahana fanazavana ireo mpanara-dia ary notazomina vonjy maika noho ny antony fitondrana basy tsisy taratasy.
Basy Mass 36 izay nolazain ireo andian-dehilahy fa an’ ireo dahalo nanafika ny volana septambra 2017 ka matin’izy ireo. Ka tamin’izany no nitazoman’izy ireo ilay basy satria araka ny nambarany dia manadanja ny fitazomana ny basy entin’ireo dahalo nanafika satria tsy manankery intsony ny odiny rehefa iny basy iny ihany no hitifirana indray ny dahalo. Ny maraina ny Alatsinainy ny vahoaka aman arivony no tonga manoloana ny fitsarana Antsirabe nilanja soratra sy taratasy mitaky ny famotsorana ireo olona 19 mirahalahy voatazona teny ary tena tsy azo natao inona ireto vahoaka marobe na nisy ary ny mpitandro filaminana maro sy fipoahan’ny baomba lakrimogene ary ny tifi-danitra tsy nahasaka an-dry zareo naneho ny fitakiany. Raha araka ny loharanombaovao dia nisy ny fifampidinihana teo amin’ny delegasionina sy ny mpitandro filaminana ka nanambara tamin’ny vahoaka izy ireo fa avotsotra ny ampahany amin’ireo olona ka entina eny Antanimenakely. Tsy nanaiky izany anefa ireo vahoaka ka naneho izany tamin’ny horakoraka. Raha ny vaoavao farany voaray dia mbola ho maro ny vahoaka ho avy eto Antsirabe hanampy azy ireo amin’ny fitakiana.
Mahafaly Olivier: Nanao tongotra an-katoka teny Tsimbazaza
Praiminisitra matahotra solombavam-bahoaka no misy amintsika. Nanaporofo izany ny zava-niseho teny Tsimbazaza, omaly maraina. Nanatrika fivoriambe iraisam-baomiera niaraka tamin’ny solombavam-bahoaka maromaro ingahy Mahafaly Solonandrasana Olivier ary vaky nandositra nanao tongotra an-katoka rehefa voatreron’ireo depiote. Tsy takona nafenina izay fihetsika nataon’ny praiminisitra izay ary betsaka ny mpanao gazety no nahita izany tamin’io fotoana io. Olona kanosa ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier kanefa hilatsaka ho fidiana amin’ny fifidianana filoham-pirenena raha ny loharanom-baovao marim-pototra. Mapametra-panontaniana ihany moa ny antony mandrisika an’ingahy Mahafaly Olivier hirotsaka ho fidiana kanefa hiarahan’ny vahoaka malagasy rehetra mahita ankehitriny ny tsy fahombiazany eo amin’ny fitariana ny governemanta. Tsara ihany mampatsiahy fa tamin’ny fotoana nitsanganan’ny governemantan’i Mahafaly Solonandrasana Olivier , tany amin’ny fiandohan’ny taona 2016, dia nambara fa governemanta vonon-kiady na “gouvernement de combat” no najoro. Governemanta hiady amin’ny kolikoly, tsy fandriampahalemana, fiakaran’ny vidim-piainana, sns sns. 2 taona mahery aty aoriana anefa, samy mahita daholo ny rehetra fa governemanta tsy mahavita azy no mijoro eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao. Aiza ilay hoe ady amin’ny kolikoly sy ny tsy fandriampahelamana? Ny tatitra farany navoakan’ny fikambanana iraisam-pirenena Transparency International dia nihemotra ny laharan’i Madagasikara eo amin’izay resaka kolikoly izay. Tsy resahina intsony ny tsy fandriampahalemana izay tsy mitsahatra mirongatra manerana ny Nosy. Heverina fa tsy nisy ireny hetsika fiaraha-mientan’ny mponina teto Andrenivohitra tamin’ny 15 marsa teo iny raha tena mahomby ny governemanta eo amin’izay ady amin’ny tsy fandriampahalemana izay. Olona tsy misy henatra i Mahafaly Solonandrasana Olivier matoa mbola sahy hilatsaka ho fidiana amin’ny fifidianana.